Wararka - Sida loo doorto Booqday Furimaha Dunida ee Booqday Furimaha Dagaalka
Waxqabadka mashiinka wax shiida ee dabaqa la taaban karo waxaa ka mid ah: balaadhinta ballac, xoqidda qaabka hawlgalka madaxa, xawaaraha wareegga, cadaadiska cutubka madaxa, xakamaynta mugga biyaha, iwm. Heerarka dhismaha ayaa loo qaybiyaa: flatness, hufnaan iyo dhalaal.
1. Meesha wax lagu shiido ee mashiinka wax shiidaya: marka la eego, baaxada mashiinka wax shiidaya ee mashiinka, ayaa sare u kacaya dhulka dhismaha, laakiin sidoo kale waa kororka mashiinka wax shiidaya taas oo ka dhigaysa heerka wax ku oolka dhulka farqiga u hooseeya
2. Qaabka hawlgalka madaxa wax shiidaya mashiinka shiida dhulka: Marba marka ka sii sii murugsan ee qaabka hawlgalka ee madaxa shiidaya mashiinka wax shiidaya, waxaa sii weynaanaya xoogaga wax shiidaya, waxaana kor u kacaya waxtarka shaqada, waxaana sii badanaya cadeynta dhulka. Awooda wax shiidaya ee mashiinka sagxadda ee sagxadda madaxa laba-geesoodka ah ayaa ah mid xoog badan.
3. Xawaaraha wareegga ee Booqday Furimaha Dagaalka: Guud ahaan, markay sii kordhaan tirada kacdoonka madaxa wax shiidaya mashiinka mashiinka dhulka, xoogga wax shiida ayaa sidoo kale kordhin doona. Si kastaba ha noqotee, xawaare aad u sarreeya wuxuu yareyn doonaa xoogga wax lagu shiido ee aaladda iyo dhulka. Marka cadaadiska madaxa wax shiidaya uu yara hooseeyo, waxay yareyn doontaa xasiloonida howlgalka mashiinka waxayna yareyn doontaa heerka dhismaha.
4. Cadaadiska unugga madaxa mashiinka mashiinka wax shiidaya: cadaadiska madaxa mashiinka mashiinka wax shiidaya iyo xitaa culeyska mashiinka, cadaadiska weyn ee madaxa mashiinka shiidaya, wuxuu sare uqaadayaa waxtarka qarashka iyo heerka. . Haddii cadaadiska madaxa wax ku shiraya uu aad u sarreeyo, xoogga goynta ayaa kordhi doona marka dhulku aad u jilicsan yahay. Waqtigaan, Furimaha dhulku kuma socon karo xawaare isku mid ah, taas oo yareyn doonta habsami u socodka dhismaha.
5. Xakamaynta mugga biyaha: Guud ahaan, shiididda dhulka ayaa loo qaybiyaa shiidi qoyan iyo shiidi qallalan, taas oo inta badan go'aamisa dhulka. Biyuhu waxay ciyaari karaan doorka sifaynta, ka saarida qashinka iyo qaboojinta. Iyada oo la beddelayo habka shiididda ee granite dhul adag, xaddiga biyaha waa in lagu xakameeyo waqtiga. Heerkulka sifaynta dhulka ayaa sidoo kale si toos ah u saameyn doonta iftiinka iftiinka.
Iyadoo loo marayo soo bandhigida waxqabadka mashiinka wax shiida dhulka, waxaan aaminsanahay in qof kastaa fahmi karo waxqabadka qayb kasta oo ka mid ah mashiinka wax shiidaya dhulka oo ay fududahay in la doorto mashiinka wax shiida dhulka oo sifiican baahidaada u daboolaya